Kolikoly avo lenta :: Nogadraina ny vehivavy iray vadina minisitra teo aloha • AoRaha
Naiditra am-ponja, tamin’ny zoma 6 septambra lasa teo, eny Antanimora ny vehivavy iray vadina minisitra teo aloha sy vehivavy iray hafa vadina manamboninahitra iray ao amin’ny Polisim-pirenena. Maro ny fiampangana nanenjehana azy ireo teny amin’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly na ny PAC.
Niainga tamin’ny fitoriana napetraky ny Sampana misahana ny famotsiam-bola na ny Samifin ity raharaha ity. “Nisy fitarainana maro tonga teny amin’izy ireo momba ny fivoahan’ny angom-baovao ao anatiny izay voasokajy ho tsiambaratelo. Misy olona mitonona ho avy amin’ny Samifin maka vola amin’olona. Niverimberina matetika ny anarana vehivavy roa izay tsy fantatra akory ao amin’ny Samifin. Nametraka fitoriana olon-tsy fantatra ny Samifin taorian’izay. Fantatra tany amin’ny famotorana fa polisy manamboninahitra sady mpanangom-baovao miasa ao amin’ity Sampana miady amin’ny famotsiam-bola ity ihany no namoaka an’ireo vaovao tsimbaratelo ireo. Ampiasain’ireo vehivavy roa ho loharanom-bolan’izy ireo izany vaovao izany”, hoy ny loharanom-baovao iray.
Vita tamin’ny zoma teo ny famotorana momba ity raharaha ity. Kolikoly, fikambanan-jiolahy, famoahana ny tsiambaratelon’ny Samifin, no vesatra niampangana an’ireo olona telo, dia ilay vadina minisitra teo aloha, ilay manamboninahitra polisy sy ny vadiny. Samy natolotra ny PAC avokoa izy telo tamin’ny zoma. Noho ny tsy fisian’ny taratasy fahazoan-dalana manenjika ilay pôlisy no nanomezan’ny fitsarana fahafahana azy aloha.
Milaza ny eo anivon’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka fa: “tsy mbola naharay ny taratasy fangatahana fahafahana manenjika an’itsy manamboninahitra polisy itsy”. “Miandry an’io taratasy io aho”, hoy ny Contrôleur general, Rafanomezantsoa Roger. Nilaza kosa ny teo anivon’ny PAC fa: “anio no tokony ho voarain’ny minisitry ny Filaminam-bahoaka izany taratasy fangatahana fahahafana manenjika an’ilay manamboninahitra pôlisy izany”. “Mbola nanenjika raharaha maro hafa izahay tamin’ny zoma ka izay no antony ho androany (ndlr : alatsinainy) vao afaka nanao ny taratasy”, hoy Rakotomahefa Mamy Tantely, lehiben’ny Fampanoavana ao amin’ny PC, omaly hariva, raha nanontaniana momba izao raharaha izao.
Isan’ny rafitra milokaloka amin’ny fanaovana ny fanadiovana anatiny mba hamerenana ny fitokisan’ny vahoaka ny mpitandro filaminana ny eo anivon’ny Polisim-pirenena. Tapaka izany tamin’ny fihaonambe nataon’ireo tompon’andraikitry ny Polisim-pirenena rehetra teny Ivato, tamin’ny tapaky ny volana aogositra lasa teo. Fepetra hentitra noraisin’ny mpitantana ny Polisim-pirenena voalohany taorian’io fihaonana io ny nanolorana ny Fitsarana an’ilay polisy namono nahafaty jiolahy iray efa lavo tamin’ny fitifirana ny lohany teo imasom-bahoaka teny Ampefiloha, andro vitsy lasa izay. Naiditra am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy io polisy io taorian’ny famotorana.
Fandrobana tsy tanteraka :: Maty voatifitra ilay tovolahy saika nangalatra kisoa